आश्विन २२, २०७४ भिषा काफ्ले
यस्तो अवस्थामा आमाको ज्यान उच्च जोखिममा हुन्छ । रक्तश्राव धेरै भएकाले उनलाई तत्काल रगत दिनुपर्ने अवस्था आयो । उनको ज्यान बचाउन अस्पतालकै केही डाक्टर शल्यक्रिया गर्नतिर लागे भने केही रगतको जोहो गर्न । तत्काल अन्यत्रबाट रगत आउने सम्भावना नभएपछि शल्यक्रिया गर्दा बेहोस बनाउनका लागि बसेका डा. रमेश भट्टराई आफैंले पहिलो एक पिन्ट रगत दिए । डा. निराजना कायस्थ, डा मंगल रावल, डा. हरिहर देवकोटा, डा. अनुस्मृति पल, डा. अनुपमंगल समाललगायतका चिकित्सकहरू पनि कोही थप रगत जुटाउन लागे भने कोही डा. राजीवलाई शल्यक्रियामा सहयोग गर्न । डाक्टरहरूको अथक प्रयासमा ५ घण्टाको शल्यक्रिया र १४ पिन्ट रगत दिएपछि हमालले जुम्लाको कर्णालीको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ‘पुनर्जन्म’ पाइन्, नवजात शिशुको साथमा ।
प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ ११:४९
अनुभूति : यसपालि यस्तै भयो–२
आश्विन २२, २०७४ नवराज पराजुली
आफूलाई सधैंभरिलाई सँगै राख्ने मान्छेलाई छोडेर टाढा जाँदा, उसको हातमा आफूले छोडेर जाने उपयुक्त उपहार के हुन्छ ? छोडेर जानु भनेको त बस्नेलाई सजाय दिएर जानु हो ! त्यसो भए सजाय दिएर जानेले उपहार दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
‘...एउटा चियाकपको पछाडि आफू बसी
अर्को चियाकपको पछाडि तिमीलाई राखेर
तिमीसँग आधा कप जति गफ गरौँ न त भन्दा
उसले र मैले पिएका जुठा कपहरू
तँछाडमछाड गर्दै टेबलमा उभिन्छन्
ती कपको पिँधमा रहेको अलिकति चिया
त्यो चियामा बाँकी रहेको अलिकति चिनी
जो अहिले तीतो भएको छ
त्यो म हुँ !
बिर्सिएर सबै पुराना बाटाहरू
र यो नयाँ बाटोबाट कहाँ पुग्ने भन्ने पनि बिर्सिएर तिमीसँग
दुई परेली जति बाटो सँगै हिँडौं न त भन्दा
वर्षौंदेखि बाटो बिर्सिएर
मलाई नै बाटो सोध्न
मेरै बाटो पर्खिरहेका
उसका र मेरा पैतालाका केही जोडी डोबहरू
धूलोमा श्वास फेरिरहेका
त्यो मेरो हो...’
‘आफ्नो स्कुलको किताबमा भएका कविता पढ्नेबाहेक कहिल्यै कविता नसुनेका भाइहरू कविता सुन्न आएका छन्, नवराजजी,’ म्युनिखमा कविता कन्सर्टका आयोजक सुवासजीले म स्टेजमा चढ्नुअघि भने । मैले ती कविता नसुनेका कुमारी कानहरूलाई हेरें । मनमनै लाग्यो— यी भर्जिन कानहरू हुन्, आज मज्जा आउने भो ।
म : उहाँहरू अरू के गर्नुहुन्छ ?
सुवासजी : क्लब छ, फुटबल खेल्छन् ।
म : कस्तो छ खेल ?
सुवासजी : खतरा । फुटबलका लागि जहाँ पनि पुग्छन्, जे पनि गर्छन् । ‘कविता बुझ्नै सकिन्न, मजै आउँदैन’ भन्दै थिए, मैले ‘आज सुन, बुझेनौ र मजा आएन भने म फेरि कहिल्यै बोलाउँदिनँ’ भनेको छु । ठीक भनें ?
म : मज्जाचाहिं म भन्न सक्दिनँ, तर जो फूटबल राम्रो खेल्छ, उसले कविता मज्जाले बुझ्छ । खेलाडीले जति राम्ररी कविता कमैले बुझ्लान् । खेल पनि त सम्बन्धहरूको कविता हो । कविता पनि त सम्बन्धहरूको खेल हो ।
मैले ‘च्याउ’ कविता सुनाएपछि ती सबै खेलाडीहरूले कुर्सीबाट उठेर ‘वान्स मोर ! वान्स मोर !!’ भन्दै चिच्याउन थाले । मभित्रको एउटा म ‘स्ट्यान्डिङ ओवेसनसहितको वान्स मोर’ मै मख्ख थियो, तर मभित्रको अर्को म सोचिरहेथ्यो, ‘छाला र मासुको गणितले नापिएर हेपिएकी त्रिचालीस वर्षकी अविवाहित नारीको कथामा लेखिएको यो कवितामा, यी तेह्रदेखि तेइस वर्षभित्रका कलिला केटाहरू आफूलाई कहाँ पाइरहेछन् ? आफूलाई नभेट्टाएको कवितासँग पनि दोहोर्‍याएर बाँचिरहन मन लाग्छ र ? आफूलाई नभेट्टाएको मान्छेसँग पनि दोहोर्‍याएर बाँचिरहन मन लाग्छ र ? आफूलाई नभेट्टाएको संसारमा दोहोर्‍याएर बाँचिरहन मन लाग्छ र ?’
त्यसपछि जे भयो, त्यो जादु थियो, डिभाइन म्याजिक । म ‘खोया’ कविता सुनाउन लागेको थिएँ । मैले सुवासजीले भनेको सम्झें, ‘आफ्नो स्कुलको कितावमा भएका कविता पढ्नेबाहेक कहिल्यै कविता नसुनेका भाइहरू कविता सुन्न आएका छन्, नवराजजी ।’ म अल्मलिएँ, ‘खोया’ कविता सुनाऊँ कि नसुनाऊँ ? यो कविता मलाई खुब अल्मल्याउने कविता हो । मलाई आफ्ना सबै कविता कैले कहाँ कसरी लेखिए भन्ने याद छ, तर ‘खोया’ कहाँ र कसरी लेखें याद छैन । यसको सबैभन्दा पुरानो याद भनेको पहिलोपल्ट सुनाएको याद हो, लगातार दुईचोटि, उही भाव र प्रभावमा । यो कविता किताबमा पनि नराख्ने र कसैलाई कहिल्यै नसुनाउने कि भन्ने पनि सोचेको थिएँ !
किन किन मलाई ‘खोया’ सुनाउन मन लाग्यो, मानौं यहाँ कोही छ जसलाई सुनाउँदा म ‘त्यही भाव’ मा पुग्छु र उसमा ‘त्यही प्रभाव’ पुग्छ । तर जादु भयो, डिभाइन म्याजिक ।
मैले कविता सुनाउन सुरु गरें, फुटबल सुरु भयो । एउटा टिममा म र ‘खोया’ छौं, अर्को टिममा मेरो आँखाअगाडिका फुटबल खेलाडीहरू छन्, किन–किन लागिरहेथ्यो फरक टिमबाट भए पनि हामी एउटै पोस्टमा गोल गर्न खोज्दै छौं । उनीहरूका आँखामा लाम्चा खोयाहरू गोला फुटबल बनेर दौडिरहेको देख्दै थिएँ । त्यहाँ एक जना खेलाडी थिए, करिब सत्र वर्षका, जो मैले फुटबल जता लग्यो त्यतै–त्यतै मेरै चालमा मैजस्तै मैसँगै थिए । उनले अनौठो गरी मलाई हेरिरहेका थिए, मानौं उनी केही माग्न चाहन्थे । मैले भनें :
एउटा चियाकपको पछाडि आफू बसी
उनी मेरो नजिक आएझैं लाग्यो । मेरै खुट्टाको छेउमा उभिएजस्तो । म भन्दै थिएँ :
दुई परेलीजति बाटो सँगै हिँडौं न त भन्दा
बुट्टा बिग्रिएको जुन पैताला छ...
यति बोलिसक्दा नसक्दै मैले देखें कि मेरो अगाडिका ती भाइ केही बोल्न खोज्दै थिए, मुखबाट बोली निस्कने लागेको देखें, फुटबल पास मागेजस्तै गरी । आफू रोकिएर मैले उनलाई बोल्न दिएँ, फुटबल पास दिएँ । उनले बोले :
...त्यो मेरो हो ।’
म डराएँ । म रमाएँ । म डरलाग्दो गरि रमाएँ । म फेरि अलमलिएँ, ‘कहिल्यै कविता नसुनेको उसले कसरी मेरो कविताको बाँकी वाक्य पूरा गर्‍यो ? उसका आँखामा यस्तो आनन्द थियो जस्तो एउटा कविले कुनै नयाँ कविता लेखिसक्नेबित्तिकै हुन्छ । उसमा त्यो आनन्द कसरी आयो ? ऊ यो कविता पहिलोचोटि ‘सुन्दै छ’ कि उसलाई यो कविता पहिलोपल्ट ‘फुर्दै छ’ ? के उसलाई थाहा थियो कि म उसलाई त्यो पलमा फुटबल पास दिनेछु र उसले सुट गर्नेछ अनि गोल लाग्नेछ ? के हामीले यो खेल पहिल्यै खेलिसकेका थियौं ? उसले जो ‘...त्यो मेरो हो’ भन्यो, त्यो उसको मेरो हो कि मेरो मेरो हो ?’
कविता सुनाइरहेको पलमा थिएँ । अझ कविताको बीचमा थिएँ । मैले यसरी अल्मल्लिरहन मिल्दैनथ्यो । कविताको बाँकी भाग सुनाउनुपथ्र्यो । तर मलाई त्यहीं अल्मलिरहन मन लाग्यो, त्यही पलमा, तिनै सेकेन्डहरूमा । मेरा लागि कविताले सबैभन्दा सुन्दर गरी गोल गरेको थियो, त्यो पल । त्यो सानो भाइ त्यहाँ पुगेको थियो जहाँ यो कविता लेखिँदा सायद म पुगेको थिएँ, जुन (अघि मैले भनें नि) याद छैन । आहा ! त्यो भाइले मलाई याद नभएको यादको याद दिलाइदियो ।
केही मान्छेहरू आफूले बिर्सेको आफ्नो याद दिलाइदिन्छन् । सायद हामी त्यस्तै मान्छे भेट्नलाई बाँचेका हुन्छौं । सायद भेटेर पनि कहिलेकाहीं चिन्दैनौं । सायद चिनेर पनि साथै राख्दैनौं । सायद राख्न सक्दैनौं । सायद राख्ने आँट गर्दैनौं । सायद हामीले पर्खिनुपर्छ, समयले बनाइदिएको लुँडोको भर्‍याङ उक्लिनलाई, किनकि सीधा बाटो त यो जिन्दगीमा एक्लै लुँडोको सयसम्म पुग्न सकिन्न । सायद पुगे पनि आफ्नो मान्छे अन्तै देख्दा आफूलाई तल झर्न मन लाग्ला । तर सयमा तल झार्ने पुच्छर भएको सर्पको मुख हुन्न । सायद यो अनुभूति ठीक हो भन्न पनि हामीलाई कोही चाहिन्छ । जस्तै कि म यतिखेर ‘सायद’ लेखिरहेको छु । मलाई पनि पक्का यो अनुभूति यही हो भन्न ऊ चाहिन्छ ।
छोडेर त्यो पललाई त्यहीं, बढें म कविताको बाँकी बाटोमा जसको अन्त्यमा चाहिं म अल्मलिन्नँ :
‘... तिमी यस्तो बेलामा आएकी छ्यौ कि
तिमीलाई ‘बस न’ भन्न ओठ डराउँछ
तिमी गएको हेर्न आँखा डराउँछन्
तपाईं आफूलाई मन परेको एउटा गीत कतिपटकसम्म लगातार सुन्न सक्नुहुन्छ ? मेरो उत्तर सजिलो छ : जतिचोटि पनि । मेरो लागि मन परेको गीत मन परेको मान्छेजस्तै हो । मन परेको मान्छेले मनैदेखि गरेको मन छुने गनगन कतिपटकसम्म लगातार सुन्न सक्नुहुन्छ ? मेरो उत्तर सजिलो छ : जतिचोटि पनि । मेरो लागि मन परेको मान्छे आफंैजस्तै हो । तपाईं आफ्नो कुरा कतिपटकसम्म लगातार सुन्न सक्नुहुन्छ ? उत्तर सजिलो छ ... । सिड्नीबाट क्यानबेरासम्मको ३०० किलोमिटरको मोटरयात्रामा सम्यक भाइ र मैले सानु घिमिरेजीको मोबाइलको डाटाको काँटा तल पुगुन्जेल दुइटा गीत दोहोर्‍याएर सुनिरह्यौं : ‘कतियाँ करूं’ (‘रकस्टार’ फिल्मबाट) र ‘हवाएँ’ (‘जब ह्यारी मेट सेजल’ फिल्मबाट) । सिड्नीबाट मेरो हिरो साथी अन्जित (जो बिहान–बेलुकी आधा खाना र आधा गीत खान्छ) ले ‘हवाएँ’ कतिऔं चोटि सुन्दै छु भन्ने खबर मोबाइलमा पठाउँदै थियो । मैले म्यासेज गरें, ‘म फर्केपछि
सिड्नीको हावासँगै चबाउनुपर्छ ।’ गीतकार इर्साद कामिलले यो ‘हवाएँ’ भन्ने गीतमा लेखेका छन् : ‘...मै जो तेरा ना हुवा, किसिका नहीं...’ (या त म तिम्रो हुँ, या कसैको पनि हैन) । सिड्नीबाट क्यानबेरा जानु मेरा लागि काठमाडौँबाट झापातिर जानु, वालमजुंगतिर जानु, या हेटौंडातिर जानु या सुर्खेततिर जानुजस्तै थियो । काठमाडौँ सुन्दर सहर हो, तर सहर हो । सिड्नी सुन्दर सहर थियो तर सहर थियो । गाउँको मान्छे सहरमा बस्दा ऊभित्र एउटा खाली ठाउँ बाँकी भैरहन्छ, गाउँका लागि राखेको खाली ठाउँ, छोडेर गएको मान्छेको ठाउँजस्तै । त्यहाँ बेला–बेला ऊ गइरहन चाहन्छ । हामी गाउँबाट आएकाहरूलाई बेला–बेला खुला चाहिँदो रहेछ, कम्तीमा त्यति खुला कि हावा ट्राफिक जाममा नपरोस् । खुलाले गाउँको तिर्खा मेटाउँछ । कम्तीमा त्यति खुला कि मान्छे जोडिएका हुन् घर हैन । घरहरूलाई पनि आफ्नो काखीमा हावा छिर्ने ठाउँ होस् । हावाले गाउँको तिर्खा मेटाउँछ । हावा । ‘हवाएँ’ । ‘...मै जो तेरा ना हुवा, किसिका नहीं... ।’ मलाई थाहा हुँदै थियो कि क्यानबेरामा केही त्यस्तो छ, जसले मलाई उसको नजिक पुर्‍याउनेछ जसको म हुन चाहन्छु । नभन्दै विनायकजीले हामीलाई एउटा यस्तो टावरमा लिएर गए जहाँबाट मैले एक अद्भुत दृश्य देखें : केही यस्ता साना पहाडहरू जसको खुट्टामा जल चढाउन भनेर समुद्रको एउटा औंला आइपुगेको छ । रूखमा फल फलेजसरी ती पहाडमा रूखहरू फलेका थिए । पहाडको अनुहार थियो, अनौठो आकारको । पर्खाइको आकार कस्तो हुन्छ ? त्यस्तै आकारको । त्यो अनुहारको एउटा सानो नाक थियो, जो सायद पहाडलाई मन पर्दैनथ्यो । म पहाडको त्यो पुन्टे नाकलाई मेरा बुढीऔंला र चोरऔंलाले चेपिदिन चाहन्थें । तर पहाड टाढा थियो, मेरा औंलाभन्दा टाढा, म छुन सक्थें, आफूले लगाएको लुगालाई जस्तै गरी । हामी टावरमा उभिएर तातो कफी पिउँदै पहाडलाई हेर्दै थियौं । बाहिर निस्किँदा त सहन नसक्ने गरी चिसो सिरेटो चल्दै थियो । चिसोले उडाउलाजस्तो ! म डराएँ ‘पहाडलाई चिसो लाग्दैन ? चिसोले मेरोजस्तै पहाडको हड्डी दुखायो कि !’ एउटा जादुले छोएको त्यो पलमा, मभित्र पहाड मिस्सिएजस्तै भयो, यसपालि यस्तै भयो ।
ऐले सोच्दै छु— मिल्यो भने पहाडले यो लेख पहाडमै बसेर पढ्ला ।